~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: ဘလော့မိတ်ဆွေများအကြောင်း (Belated Post for Blog Day)
Posted by witch83 at 6:20 PM
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) September 15, 2013 11:46 AM
စိတ်ဝင်တစား ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ် ရှင်။ :)
ဟန်ကြည် September 16, 2013 4:46 PM
အေးဗျ...choco thazin တစ်ယောက် စာမရေးတော့တာ နှစ်နဲ့တောင် ချီနေပြီထင်တယ်...
chocothazin September 19, 2013 1:52 AM
မမ​မေ ... မ​မေ့​သေးပဲ ထည့်​​ရေးတာ​ကျေးဇူး :-)
အစ်​ကို ဟန်​ကြည်​ ... ​ရေးဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်​. ​နောက်​ပိုင်း ​ရေးထားတာ​တွေ အား​ပေးပါဦး :-)
စံပယ်ချို September 20, 2013 10:42 AM
ကျေးဇူးပါပဲညီမလေးရေ....နောက်ကျလဲရပါတယ် အမဂျက်လဲလာဖတ်တာနောက်ကျတာပါပဲ ဘလော့ထဲမ၀င်ဖြစ်လို့နော်
witch83 September 21, 2013 11:40 PM
စာလာဖတ်ကြတဲ့အတွက်ရော၊ comment တွေအတွက်ပါ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။း)
@ကိုဟန်ကြည်... တကူးတက စာလာဖတ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စကားမစပ်.. ချိုကိုသဇင် စာမရေးတာ (၃)လလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
@ မဂျက်(စ်) .. No worries, I know you are busy and thanks for asking me to write this tagged post. Thanks for ur encouragement as well. :)